तोकिएको मितिमा प्रतियोगिता हुनु पर्छ–श्रीपाइली - Butwal Online
पुर्व युवातथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइली बृहत आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन हुने प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत बाँके, बर्दिया र दांगका प्रमुख भेन्यु अवलोकन गरी संघीय राजधानी फर्किनु भएका छन् ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद साविक मध्यपश्चिमाञ्चलमा आयोजनाको जिम्मेवारी उहाँको एकल निर्णयबाट भएको थियो । आफ्नो कार्यकालमा दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन तहमा लगिएको बताउने पुर्व मन्त्री श्रीपाइलीले निर्माणाधीन संरचना हेरिसकेपछि समयमै आठौं गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । नेपाल समाचारपत्रले उहाँसँग गरिएको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ ।
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि निर्माण भएका भौतिक संरचनाको अवलोकन गरेपछि के पाउनु भयो ? आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद समयमै गर्न सकिन्छ?
आठौँ राष्ट्रिय ०७५ सालमा नै नेपालगन्जमा गर्ने हामीले उद्घोष गरिसकेका छौँ । तोकिएको मितिमा गर्न सक्यौँ भने खेलकुदका लागि ऐतिहासिक हुने छ । नेपालगन्जलाई चिनाउने र प्रदेश नं. ५ का लागि अवसर पनि हो । आठाँै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यो बर्ष नै गर्न सम्भव छ । भौतिक पूर्वाधारहरु पनि धेरै बनिसकेको अवस्था छ । केही प्राइभेट सेक्टर र सरकारी भौतिक पूर्वाधार यहाँ भएकोले प्रतियोगिताका लागि पर्याप्त संरचना भएको मैले पाए ।
आठौँका लागि निर्माण भइरहेका भौतिक पूर्वाधार पनि खेल्न मिल्ने भइसकेको मैले पाए । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि हामीले पूर्ण रुपमा प्रतियोगिता संचालन गर्न सक्छौँ । आठौँ खेलकुद भौतिक पूर्वाधारका कारण रोकिने अवस्था म देख्दिन । सबै दृष्टिकोणले हेर्दा प्रतियोगिता रोकिने कुनै कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनोट भइसकेका छन् । खेलाडीमा उत्साह जागिसकेकोल ेत्यो उत्साहलाई मर्न दिनहुँदैन ।
चैतमै प्रतियोगिता गर्नुपर्ने बाध्यता छ र ? चैतमा नगरेर अरु समयमा गर्दा के हुन्छ ?
नेपाल सरकारले २०७५ मा आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । सरकार भनेको एउटा साँचो बोल्ने हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन जरुरी छ । सरकारले सत्य बोल्छ भन्ने आशा जनतामा हुन्छ, त्यसैले पनि पछिल्लो विरासतलाई तोड्दै यस पटक तोकिएको समयमै प्रतियोगिता गराउन जरुरी छ ।
यदि समयमै प्रतियोगिता गराउन सकिएन भने बर्तमान नेतृत्व र सरकारको अस्तित्व नै हराउनेछ । हामी २०७५ मा नै आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भनेर अभियानमै लागेका छाँै र गर्न पनि पर्छ । अब प्रतियोगिता गराउन सम्भव पनि छ ।
भौतिक पूर्वाधारहरु अलपत्र पर्दैनन् किनभने विगतका प्रतियोगिताबाट केही पाठ सिकेका छाँै । जनताले आशंका गर्नु पनि स्वभाविक हो । म नेतृत्वमा रहिरहँदा मैले यो विषयमा राम्रोसँग बुझेको छु र सबैमा विश्वस्त रहन अनुरोध पनि गर्दछु । साथै खेल प्रेमी तपाई हामीले चासो राखिराख्न जरुरी छ ।
प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा हेर्दा खेरी नि ?
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीम ओलीको सक्रियता, लगन र जिम्मेवारीपनले अहिले जुन रुपमा तयारी अघि बढिरहेको छ त्यो सन्तोषजनक नै छ । मन्त्रालयले पनि आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई विशेष रुपमा लिएकोले हाम्रो चासो र सहकार्य सदैव हुने नै छ ।
मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधारहरु बनिसकेका छैनन्, खेलाडीहरुका लागि खेल्ने बातावरण बनेको छैन जस्ता भ्रम सिर्जना गर्ने खालका कुरा सुनाइ रहनुहुन्छ, तर हामी यो विषयमा गम्भिर नै छौँ । म त्यसैले आफै अवलोकन गर्न आएको हुँ । यसलाई समयमै सुरु गरेर सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने मेरो पनि जिम्मेवारी हो भन्ने लागेर यसमा चासो लिइरहेको छु । खेलकुदप्रति मेरो असाध्यै प्रेम छ । भौतिक पूर्वाधार हेर्दा यसको नतिजा राम्रो देखिरहेको छु । खेलाडीहरुले मिति चाँडा ेतोक्नु प¥यो भनिरहेका बेला मन्त्रालयलाई ठूलो जिम्मेवारी पनि थपिएको मैले महशुस गरेको छु ।
यसअघि पनि चौथो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नेपालगन्जमा सम्पन्न भइसकेको छ । त्यो बेलाको भौतिक पूर्वाधारको तुलनामा प्रदेश ५ मा कायापलट नै भएको छ, तर भिआइपि प्याराफिट अझै पनि निर्माणकै चरणमा भएकाले के प्रतियोगिता तोकिएको समयमा हुन सक्ला?
हिजोको परिस्थिति भन्दा अहिलेको अवस्था विकसित भइसकेको छ । नेपालगन्जमा झण्डै २१ वर्षपछि राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दै छौँ । त्यसैले पनि यस पटकको प्रतियोगिता इतिहासकै राम्रो हुन जरुरी छ । खेलाडीहरु राष्ट्रका गहना हुन उनीहरुलाई राष्ट्रप्रति भाव जगाउन सकियो की सकिएन भन्ने पनि महत्वपूर्ण विषय हुन सक्छ । खेलाडीलाई अघि बढाउन निरन्तर प्रतियोगिता गर्नु पर्छ । सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारसहित नेपालगन्जमा खेल मैदान निर्माण पूरा हुन लाग्दा असम्भव भने केहि छैन । अस्थायी प्याराफिट बनाएर भएपनि समयमै प्रतियोगिता हुन्छ । खेलाडीको मनोविज्ञानलाई बुझ्ने गरी यहाँ पूर्वाधार बन्नेमा ढुक्क छु ।
संघीयतालाई यसले कसरी सघाउ पु¥याउन सक्छ ?
देशले खेलकुदका क्षेत्रबाट विकास गैरहेको छ । ग्रामिण स्तरबाट पनि खेलाडीहरु उत्पादन भइरहेका छन् । स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण भइइरहेका छन् । स्थानीय तहबाटै क्षमतावान खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसलाई प्रदेश र केन्द्रले पनि बराबर रुपमा सहयोग, सहकार्य गर्दै जान्छ । यतिका भौतिक पूर्वाधार बन्दा यसलाई स्वामित्व लिने धेरै आउन सक्छन् । सबै मिलेर यसलाई जोगाउन आवश्यक छ । खेलकुदले नमिलेको जोडीलाई पनि मिलाउँछ । त्यसैले यो आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदले बर्दियाका खेलाडीलाई पाल्पासँग, पाल्पाका खेलाडीलाई बर्दिया, नेपालगन्ज ल्याउने छ ।
त्यस्तै अन्य जिल्लाका खेलाडीलाई मित्रता कायम गर्नेछ । संघीयताले झनै भावनात्मक रुपमा जोड्नेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णालीदेखि १ नम्बर प्रदेशलाई समेत प्रतियोगिताले जोड्ने छ ।
दुई वर्षको दौरानमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जुन रुपमा काम ग¥यो त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हुन त दुई वर्षको अवधि भनेको लामो समय हो । नेपाली खेलकुदको आशा हिजो एउटा पहुचँ भित्र थियो । पहुचँ वालाहरुको मात्र हाली मुहाली थियो । आज हेर्ने हो भने सर्वसाधारणमा पुगिरहेको छ । गाउँ घरदेखि दुर दराजसम्म पुग्न जरुरी छ । अहिले हेर्ने हो भने यसको व्यवस्थापन पक्ष अलि कमजोर छ, यसको बावजुद काम भने राम्रो भइरहेको छ । खेलाडीहरुको भविश्यलाई हेरेर खेलकुद परिषदले काम गर्न आवश्यक छ ।
अब तपाईको तर्फबाट केन्द्रमा के कस्तो पहल हुन्छ ?
मैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायमा आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई संचालनको कुरा गर्ने छु । प्रतियोगितालाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।